ICasa Taj 9 amakamelo okulala
Kufaka phakathi umpheki ozimele wesidlo sasekuseni nesidlo sakusihlwa kanye nesevisi ye-Daily Maid
I-Casa Taj iyisithabathaba solwandle sesitayela samaKoloni saseSpain esikunikeza izakhiwo ezinhle ngaphakathi nangaphandle. Amafasitela amakhulu, ama-accents ensimbi akhanyiwe, umsebenzi omuhle wamatshe nothayela, ukubumba okucebile kwemiqhele emibili, igwadle, nezinye izinto ezinhle zakha ingaphakathi lale ndawo enhle yokuhlehla.
I-Casa Taj iyisithabathaba solwandle sesitayela samaKoloni saseSpain esikunikeza izakhiwo ezinhle ngaphakathi nangaphandle. Amafasitela amakhulu, ama-accents ensimbi akhanyiwe, umsebenzi omuhle wamatshe nothayela, ukubumba okucebile kwemiqhele emibili, igwadle, nezinye izinto ezinhle zakha ingaphakathi lale ndawo enhle yokuhlehla. Ihlotshiswe ngokunaka okucophelelayo emininingwaneni ngesitayela se-Spanish Colonial, le ndawo enhle yokulala engu-9, enamagumbi okugeza angu-9½-indawo yokugeza engasebhishi ilala izivakashi ezingafika kwezi-26 endaweni engaphezulu kuka-8,200-square-square.
Igumbi lokuhlala linamafasitela amakhulu e-bay abheke ku-veranda ovulekile futhi abheke umbono omangalisayo wolwandle. Kukhona futhi ithiyetha yasekhaya ephahlelwe ngokhuni enezihlalo ezimpunga zesikhumba kanye ne-TV yesikrini esibanzi esingamayintshi angu-63 efika inama-movie akhethiwe ayo yonke iminyaka yobudala, kanye nomtapo wolwazi onezinhlobo eziningi zezincwadi.
Inezinyawo eziyisikwele ezingu-8,200 ngendawo yokuhlala yasendlini, ikhaya linezisefo zokuphepha kuwo wonke amagumbi okulala, i-cinema yokuzijabulisa, indawo yokudlela ewubukhazikhazi, indawo yokuhlala, ikhishi labapheki abachwepheshile, indawo yokuhlala enkulu, kanye nemigwaqo evulekile. Inala yesikhala iyingxenye ebalulekile yomkhathi futhi isikhala sizoqinisa izinzwa zakho ukuze ujabulele ngokugcwele lesi sakhiwo esisogwini lolwandle.
Izivakashi zizolala ngokunethezeka emakamelweni okulala angu-9 anamagumbi okugezela agcwele angu-9 nangu-2. Ikhaya lingalala izivakashi ezingafika ku-26 kusetshenziswa ama-futons. Wonke amagumbi okulala ane-air-conditioning ngamanye. Ikhishi okudlela kulo, elinezibali ze-marble-top, lifaka indawo yokudlela yasekuseni futhi lihlome ngokuphelele ngezinto zesimanjemanje. Indawo yasekuseni nayo iyindawo ethandekayo yokujabulela ukubukwa futhi umpheki otholakalayo anganikeza ukudla kwasendaweni okumnandi ngoMsombuluko kuya ngoMgqibelo. Izidlo ezimbili ngosuku zifakiwe endaweni ohlala kuyo, nezindleko zokudla zingeziwe. Isevisi yansuku zonke yensiza nokunye kuzodlula okulindele kokunethezeka futhi ikuvumele uphumule futhi ujabulele iholide lakho. Isevisi ye-Bartender iyatholakala ukuze ujabulele ama-cocktails echibini ukuze uthole imali eyengeziwe uma ucela.
Ihlanganiswe nesakhiwo sayo sakudala sase-Spanish Colonial, i-Casa Taj inikezela ngamamitha-skwele angama-2000 ovulandi abamboziwe, abazungeza indlu, abanezihlalo eziningi. Lapha ungakwazi ukuphumula ngempela kule ndawo emangalisayo ogwini lwasePacific futhi ujabulele ukushona kwelanga okumibalabala kwakusihlwa. I-pool terrace ebolile enezihlalo zokuphumula ezintofontofo ixhumene nechibi lesitayela sechweba futhi inikeza indawo ekahle yokuphumula, ukungenisa ilanga, nokujabulela ubukhazikhazi baseCosta Rica. Izinsiza zangaphandle zithuthukisa ngempela i-ambience, ziyifake ngezinto ezijabulisayo, ezifana nama-kayak ukuze uzisebenzise. Kukhona nokusebenziseka kalula kwegrill entsha yegesi, kanye nekhishi elingaphandle. Unogada wasebusuku uhlinzekwa futhi ukhona kusihlwa/ebusuku, ngaphandle kwendlu.
Ukuhlala kusekelwe ezivakashini ezingu-2 ngekamelo ngalinye kuze kuqashwe wonke amagumbi okulala angu-9. Amakamelo okulala angaqashiwe ngeke anikezwe noma ubani omunye. Ukuhlala kususelwa kubantu abangu-2 igumbi ngalinye. Esivakashi ngasinye esingaphezu kwe-18 emagumbini aqashiswayo angu-9 kunemali eyengeziwe: $142 ubusuku ngabunye ngesizini ephezulu namasonto eholide | $126 ubusuku ngabunye maphakathi nesizini | $95 ubusuku ngabunye ngesizini ephansi